LG ले यस बर्ष स्मार्टफोनको उत्पादन समाप्त गर्नेछ - स्मार्टमे
हालसालै मिडियामा देखा परेका सबै रिपोर्टहरु वास्तविकता संग मिल्दोजुल्दो छ। एलजी प्रतिनिधिहरूले भर्खरै घोषणा गरे कि स्मार्टफोनको उत्पादन छोड्ने निर्णय गरिएको छ। मोबाइल विभागले ठूलो घाटा ल्यायो।
एलजीको मोबाइल डिपार्टमेन्ट लामो समयदेखि धेरै समस्याहरूसँग स .्घर्ष गर्दै आएको छ, र महिनाको बित्तीमा वित्तीय घाटा बढेको छ। दक्षिण कोरियाली निर्माता ब्यबस्थापक बोर्डले आधिकारिक विज्ञप्तिमा घोषणा गर्‍यो कि वर्षौंको दौडान प्राप्त ज्ञान र अनुभव धेरै नवीन परियोजनाहरूमा प्रयोग गरिनेछ। लक्ष्य अन्य व्यापार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सुदृढ गर्नु हो। एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य मध्ये एक, अन्य बीच,6जी टेक्नोलोजी को विकास मा भाग लिनु हो।
यस बर्ष पछि स्मार्टफोन विभाग को तरलता
स्मार्टफोन अझै बिक्रीको लागि उपलब्ध हुनेछ। फोन मालिकहरूले पनि बिक्री पछि समर्थनमा भरोसा गर्न सक्दछन् र सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू अपेक्षा गर्न सक्दछन्। यो कहिलेसम्म जारी रहनेछ? कम्पनीका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यो क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ। मोबाइल शाखा को तरलता जुलाई २०११ को अन्त्य सम्म रहनेछ। यो सम्भव छ कि केही स्मार्टफोन मोडेलहरू यो सम्झौताको मिति पछि पनि खरीदको लागि उपलब्ध हुनेछ।
LG Wing / फोटो: LG
कम्पनीका मालिकहरू theणात्मक प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन चाहन्थे, तर एलजी भेल्भेट र विing जस्ता मोडलहरूले शानदार सफलता हासिल गरेनन्। रोल-अप स्क्रिनको घोषणा, जुन बजारमा क्रान्तिकारी मानिन्छ र ब्रान्डको आफ्नै धारणाले पनि स्थिति सुधार गरेन। यो परिवर्तन भयो कि नवीन समाधानहरूले न त एप्पल र न सामसु customers ग्राहकहरूलाई एलजी प्रस्तावमा फर्काउन प्रेरित गरे। बाँकी केकलाई वनप्लस र सियोमी जस्ता निर्माताहरूले साझा गरेका थिए।
कम्पनीको योजना के हो?
यो रणनीतिक निर्णय दक्षिण कोरियाली कम्पनी सक्षम गर्न को लागी अन्य, उस्तै आशाजनक क्षेत्रहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्न को छ। यसमा इलेक्ट्रिक वाहन कम्पोनेन्ट्स, रोबोटिक्स, स्मार्ट घर समाधानहरू र व्यापार सेवाहरूको उत्पादन समावेश छ। हालका वर्षहरूमा विकसित भएका सबै प्रविधिहरू अवस्थित र भविष्यका परियोजनाहरूमा प्रयोग हुनेछन्।